KM-3520 Yakareba Kurema Kurema Wiricheya - Karman Healthcare
KM-3520 - 29 lbs
SKU: KM-3520 Categories: Wiricheya isingaremi, Ultra Lightweight Wiricheya Tags: wheelchair isina mwero, wiricheya, mavhiripu
Iyo Karman KM-3520F vhiri cheya ine mativi emapaneru ayo anovawo echikafu chemanheru! Iyo wiricheya furemu inovakwa ye6061 T-6 ndege-giredhi aruminiyamu yesimba uye kurema uremu. Inouya yakajairika nekupeta backrest kuitira nyore kuchengetedza uye inobvisika swingaway tsoka tsoka ine velcro mount gumbo tambo. Yakakwira-giredhi murazvo unodzora, unofema nylon upholstery.
Muenzaniso: KM-3520 * KUSARIRWA *
Kupeta 6061 T-6 ndege-giredhi aluminium furu ine upfu jasi kupedzisa mune nhema mavara
2-in-1 yekudyira tireyi / yepaneru pani
Adjustable tafura kudzika
Yakapetwa flip-kumashure armrests
Swing-kure tsoka dzekumusoro nevelcro mount gumbo tambo
• 24 "x 1" mag mavhiri ane polyurethane matai
7 "x 1" macaster mavhiri ane matai erabha
Yakagadziriswa kureba anti-slip tsoka